धमाधम काठमाडौं छिर्दै कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या किन लुकायो सरकारले ? – nepaldarsan
धमाधम काठमाडौं छिर्दै कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या किन लुकायो सरकारले ?
नेपाल दर्शन संवाददाता । १६ श्रावण २०७७, शुक्रबार मा प्रकाशित
काठमाडौं उपत्यकामा साउन ९ देखि १४ सम्म १ सय २८ जना संक्रमित देखिएका छन्, यसमा उपत्यकाबाहिरबाट आउने ३६ जनालाई कोरोना देखिएको छ । ती ३६ संक्रमितमध्ये ९ जना भारतबाट आएका हुन् । साउन ९ मा १३ जनालाई संक्रमण देखिएकामा १० जना उपत्यकाबाहिरबाटै आएका व्यक्ति रहेको ईडीसीडीले जनाएको छ ।
१० मध्ये दुई जना भारतबाट आएका हुन् । बुधबार २० जनालाई संक्रमण देखिएकोमा ११ जना बाहिरबाट आएका हुन् । ती ११ मध्ये २ जना भारतबाट आएका थिए । बिहीबार संक्रमित देखिएकाको भने विश्लेषण हुन बाँकी रहेको कोइरालाले बताए ।
बाहिरबाट काठमाडौं प्रवेश गरेका सैलुनमा काम गर्ने व्यक्ति, ड्राभइर, मजदुर, व्यापारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मको स्वाब काठमाडौंमा परीक्षण गर्दा कोरोना देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार काठमाडौं उपत्यकामा ४८ जना संक्रमित देखिएको विवरण सार्वजनिक ग¥यो । तर, उपत्यकामा पीसीआर गरेर संक्रमित देखिएको संख्या भने ७० जना छन् । बुधबार पनि मन्त्रालयले १५ जना संक्रमित रहेको प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिएको थियो । तर वास्तविक संक्रमित २० जना थिए ।
मंगलबार पनि काठमाडौं उपत्यकामा ५३ जना संक्रमित भएको भन्दै विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, वास्तविक संक्रमित भने ६१ जना थिए । मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने उपत्यकामा संक्रमित भनिएको तथ्यांकभन्दा बढी संक्रमित हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीर अधिकारीले बताए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।